Olee Otú Ị Pụrụ Detuo iPod Music ka iTunes
> Resource> iTunes> Olee otú iji Detuo iPod Music ka iTunes
Ga-amasị m nyefee m music collection m girl enyi iTunes. O nwere banyere 200 songs na m ga-amasị tinye m songs si m iPod ya iTunes. Nke a nwere ike ịdị mfe ihe m na anya ma m nwere ike na-eche nke a ụzọ ime ya na-enweghị ma ihichapụ m songs ma ọ bụ hers.
Mgbe ụfọdụ, ị chọrọ iṅomi iPod music ka iTunes n'ihi ọtụtụ ihe. Eleghi anya, gị na kọmputa mkpọka ị ga-reinstall kọmputa sistemụ. Dabara nke ọma, songs bụ na gị na iPod, dị ka iPod aka 5, si otú ị chọrọ ime music ebufe. Eleghi anya, ị hapụ iTunes listi ọkpụkpọ accidently, ma ọ bụ na ị reinstall iTunes, otú ị chọrọ mmekọrịta music ka iTunes. Eleghi anya, ị dị nnọọ bu n'obi na-ndabere music ka iTunes na-enwe ya.
N'agbanyeghị ihe nsogbu ị na-ezute, ana m arịọ, ihe kasị mkpa ị na-enwe nchegbu banyere bụ ịkwaga iPod music ka iTunes. N'ezie, ọ ga-ebu mfe dị ka ogologo oge dị ka ị na-iPod ka iTunes transfer ngwá ọrụ. Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ) ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac) (n'ihi na Mac ọrụ) bụ nri otu maka gị. Na ya, i nwere ike nyefee music na ndetuta egwu ọkpụkpọ ka iTunes na ogbe ngwa ngwa. The music ọmụma, dị ka Fim, play adabere na ndị ọzọ, a ga-exported ka iTunes kwa. E wezụga music, ọ na-enyere gị nyefee na tọghata videos, TV na-egosi, Podcast, iTunes U na ndị ọzọ.
Download usoro ihe omume na kọmputa gị na-enwe na-agbalị maka free!
Olee otú mmekọrịta iPod Music ka iTunes Mfe
Ebe a, ga-amasị m na-egosi gị otú nyefee iPod ọhụrụ iTunes na Windows version. Ọ bụrụ na ị na-eji a Mac, ị nwere ike nyefee iPod music ka iTunes na gị Mac dị ka mma.
Step1. Jikọọ gị iPod gị na kọmputa
Nke mbụ niile, wụnye na ẹkedori a iPod ka iTunes transfer ngwá ọrụ na kọmputa gị. Mgbe ahụ jikọọ gị iPod gị na kọmputa na iji eriri USB. Nọmalị, a iPod ka iTunes transfer ngwá ọrụ ga-chọpụta gị iPod ozugbo mgbe gị na iPod aka jikọọ. Mgbe ahụ, gị iPod ga-egosipụta na isi interface dị ka screenshot na-egosi:
Step2. Import iPod Music ka iTunes
Ọfọn, na ala nke bụ isi window, ị na-ahụ a button - "Copy iDevice ka iTunes". Pịa ya. Wee pịa "Malite". Na niile media faịlụ ticked anya, ị kwesịrị ị na-ewepụ akara tupu iTunes U, videos, Podcast na ndị ọzọ. Mgbe ahụ, pịa "Detuo na iTunes".
Na, na, pịa "Media" ke ekpe ebi ndụ nke bụ isi window. Dị ka ị na-ahụ, e nwere ọtụtụ nhọrọ. Pịa "Music", akpa button, na-emeghe music window. Na music window, ego songs ị chọrọ mbupụ wee pịa "Export ka". Na ya ndọpụta ndepụta, họrọ "Mbupụ na iTunes Library".
Ọ bụrụ na ị exported ụfọdụ iPod songs ka iTunes tupu, ị nwekwara ike pịa "Smart Mbupụ na iTunes". Ọ na-enyere ị idetuo music na ọ bụghị na iTunes, nke ezere exporting otu music ugboro ugboro.
Cheta na: ma nsụgharị na-dakọtara na iOS 5, 6 & 7. Click ebe a iji nweta ihe Ama banyere akwado iPod ụdị.
Dị ka m kwuru n'elu, a iPod ka iTunes transfer ngwá ọrụ na-enye gị ka ị na idetuo listi ọkpụkpọ dị ka mma. Pịa "Playlist" taabụ na hapụrụ kọlụm. Mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ niile listi ọkpụkpọ na gị iPod na-depụtara. Họrọ gị chọrọ listi ọkpụkpọ na pịa abịazi nọdụ triangle n'okpuru "Export ka". Họrọ "Mbupụ na iTunes Library" ke ndọpụta ndepụta. Mgbe ahụ, playlist ebufe amalite. Dị nnọọ ka ị na-iPod ejikọrọ oge niile.
Cheta na: The Mac version anaghị akwado na-ebufe listi ọkpụkpọ site na iPod ka iTunes n'ọbá akwụkwọ n'ihi na oge ịbụ.
N'ezie, nzọụkwụ ndị yiri mgbe ị ndabere TV na-egosi, Podcast, iTunes U na ndị ọzọ na-iTunes. Ị pụrụ ime na-ebufe dị ka nzọụkwụ n'elu.
Site n'enyemaka nke a usoro, iPod ka iTunes transfer na-adịghị ihe a ajụjụ gị. Ke adianade do, ma ọ bụrụ na ị ga-esi tọn foto na gị iPod, ọ pụrụ inyere gị ndabere foto niile gị na kọmputa na iPhone, iPad na ọzọ iPod. Ị nwere ike ịmepụta ọba iji were photos, maka mfe search dị ka mma.
Otú nyefee Music si iPad ka Windows PC